PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-03-28 - Amaphoy­isa aseJozini aqwashisa ngob­ugebengu
Amaphoy­isa aseJozini aqwashisa ngob­ugebengu
Eyethu Baywatch - 2018-03-28 - NEWS • IZINDABA - Tam­lyn Jolly Jozini po­lice is­sue fraud alert
AMAPHOY­ISA aseJozini asenxuse umphakathi waku­len­dawo ukuba uh­lale uqaphile, ku­lan­dela izigameko za­ka­muva zokukhwa­ban­isa nok­weba, ok­wen­ziwa nga­bantu abay­izigebengu.
Baningi abantu baseMkhanyakude, ikakhu­lukazi abaseJozini, ase­beke baba yizisulu zokuqolwa yizigebengu.
Laba bakhwa­ban­isi bax­humana nezisulu, bazenze abantu abaseben­zela inkam­pani yomakhalekhukhwini, bat­shele izisulu ngokush­intsha kwama sim swap.
Ngenxa yoku­tatazela, nokuthemba kuze kweqe ukuthi kusuke kungu­muntu os­eben­zela inkam­pani yez­incingo, izisulu zivele zikhiphe yonke iminin­ing­wana yazo, bese lezi zig­il­amkhuba zi­donse imali emab­hange ezisulu.
Ezigamek­weni zok­weba, kuze kukhangiswe iz­imoto okuthiwa ziya­day­iswa, bese kuthi ngoba in­tengo yez­i­moto iphansi, izisulu zivele zithumele imali yesi­bam­biso, ku­lowo ‘mday­isi mbum­bulu’, bese iy­acwila.
Lezi zikhangiso em­pe­leni zin­gom­bom­bayi bokuqola abantu, bese kuthathwa iz­imali zabo. Ku­labo abazithola be­gax­ele ku­loluhlobo lobugebengu, bayanxuswa ukuba babike emaphoyiseni ase­duzane nabo, ukuze kun­qandwe lobu bugebengu.